DHX Media / Wildbrain Bonds၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ၀ င်ငွေ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ YTM ၏ ၉.၅% ထက်ကျော်လွန်သောအကျိုးအမြတ်များ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B9.5B စျေးကွက်သတင်း
DHX Media / Wildbrain Bonds၊ ကာလတို၊ အမြတ်အစွန်း၊ ပုံမှန် ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 18, 2020 ဇန်နဝါရီလ 17, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
WildBrain Spark ၏ဝင်ငွေသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းဝင်ငွေသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အလားတူကာလထက် ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ညှိနှိုင်း EBITDA သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ပထမသုံးလပတ်ထက် ၁၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စစ်ဆင်ရေးမှငွေစီးဆင်းမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒေါ်လာ ၁၀.၀ သန်းအရှုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၈.၇ သန်းရှိခဲ့သည်။
ယခုအပတ် Durig ၏အပတ်စဉ်နှောင်ကြိုးပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ကလေးသူငယ်အကြောင်းအရာနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအဓိကထားသောကနေဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုနောက်ထပ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မကြားဖူးဘူး WildBrain (ယခင်က DHX Media) သို့သော်သင်ချစ်သောဇာတ်ကောင်အချို့ပါဝင်သည် မြေပဲ ဂိုဏ်း, Teletubbies, စစ်ဆေးရေး Gadget ကို နှင့် Degrassi franchise ။ WildBrain သည် ၂၀၂၀ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်အတွက်ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် (စက်တင်ဘာလ ၃၀၊ ၂၀၁၉၉ ကိုအဆုံးသတ်သည့်သုံးလ) ။ ကုမ္ပဏီ၏အလွန်အောင်မြင်သော YouTube Channel၊ WildBrain Spark, ပြီးခဲ့သည့်ရပ်ကွက်အနည်းငယ်ကနေ၎င်း၏ထူးချွန်တိုးတက်မှုနှုန်းဆက်လက်သိရသည်။ WildBrain Spark နှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းကောင်းများအပြင်လေးပုံတစ်ပုံတွင်အခြားအနိုင်ရရှိမှုများလည်းရှိခဲ့သည်။အပေါ်ကျည်ဆံများကိုကြည့်ပါ).
(ငွေကြေးဈေးနှုန်းအားလုံးသည်ကနေဒါဒေါ်လာ၊ CAD) ဖြစ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်နှင့်အတူမူရင်းအကြောင်းအရာအသစ် ( အာကာသအတွင်း Snoopy စီးရီးမှသီးသန့်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Apple က TV ကို YouTube တွင်လူကြိုက်အများဆုံးကလေးရုပ်သံလိုင်း၏ဆက်လက်တိုးတက်မှုနှင့် WildBrain သည်၎င်း၏ထောင့်တွင်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောအနိုင်ရရှိမှုအချို့ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဒီလတ်တလောသုံးလပတ်မှာခိုင်မာတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူကုမ္ပဏီရဲ့ ၂၀၂၄ ချေးငွေဟာ ၁၀% ၀ န်းကျင်ရနေတယ်။ Durig ပြီးသားသည်ဤ 2024 ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အတွက်အနေအထားရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ WildBrain ၏ဆက်လက်အောင်မြင်မှုများကြောင့်ဤချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် Durig's တွင် ထပ်မံ၍ တွက်ချက်ရန်အလွန်ကောင်းသည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစုအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၏စုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်။
WildBrain သည် ၄ ​​င်း၏စတုတ္ထသုံးလပတ်နှင့် ၂၀၁၉ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်အစရှိသည့်ခိုင်မာသောရလဒ်များကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာကုမ္ပဏီ၏ WildBrain Spark၊ YouTube ကို။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် Snoopy in Space တွင်မူလအကြောင်းအရာအသစ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အက်ပဲလ်တီဗီဝန်ဆောင်မှုအက်ပဲလ်တီဗွီတွင်သီးသန့်ပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ပထမ ဦး ဆုံးသုံးလပတ်အတွင်း WildBrain ၏ထင်ရှားသောအောင်မြင်မှုအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Q8 112.3 တွင်ဝင်ငွေသည် ၈% တိုးတက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၁၁၂.၃ သန်းအထိရှိခဲ့သည်။
WildBrain Spark မှရရှိသောဝင်ငွေသည်တစ်နှစ်တာအတွက် ၃၇% မြင့်တက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၂၂.၁ သန်းအထိရရှိခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှငွေစီးဆင်းမှုသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀.၀ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ပထမသုံးလပတ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၈.၇ သန်းအထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ချိန်ညှိထားသော EBITDA သည် ၁၉၁၉ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၇.၃ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၉.၆ သန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းအကျိုးအမြတ်သည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်က ၄၁% ရှိခဲ့ရာမှ ၄၄% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
အဲရစ် EllenbogenWildBrain ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကကုမ္ပဏီ၏ပထမသုံးလပတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်သက်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာတိုးတက်မှုတွေဆက်ရှိနေဖို့၊ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖန်တီးဖို့၊ ကြော်ငြာတွေကိုအခြေခံတဲ့ဗွီဒီယို ၀ ယ်လိုအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း AVOD ကိုကြည့်ရှုဖို့နဲ့ငွေသားစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆက်ပြီးလုပ်နေပါတယ်။
WildBrain (ယခင်က DHX Media Ltd. -TSX: DHX; NASDAQ: DHXMသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကလေးများပါဝင်သောအကြောင်းအရာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် မြေပဲ, Teletubbies, စတော်ဘယ်ရီ Shortcake, Caillou, စစ်ဆေးရေး Gadget ကိုနှင့်ချီးကျူး Degrassi franchise ။ WildBrain သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကလေးသူငယ်ပြပွဲ၏ထုတ်လုပ်သူများအနက်တစ်နာရီဝက်နာရီ ၁၃ နာရီတွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောကလေးများစာကြည့်တိုက်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အကြောင်းအရာကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထုတ်လွှင့်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လိုင်စင်ချထားပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအစီအစဉ်မှတဆင့်ချီးမြှင့်ငွေကိုထုတ်ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံ WildBrain Spark မှတစ်ဆင့် YouTube တွင်ကလေးများအတွက်လိုင်းများ၏အကြီးဆုံးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကနေဒါတွင်အခြေစိုက်ပြီး WildBrain သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရုံးများရှိသည်။
WildBrain Spark - ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှု
WildBrain Spark၊ WildBrain ၏ကြော်ငြာပံ့ပိုးမှုပေးသောဗီဒီယိုလိုအပ်ချက် (AVODYouTube သည်ကလေးများလိုင်းများ၏အကြီးဆုံးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2020 ဘဏ္fiscalာရေးနှစ် (ဘဏ္quarterာရေးနှစ်) ၏ပထမသုံးလပတ် WildBrain စီးပွားရေး၏ဤအပိုင်း၏အားသာချက်ကိုပြသသည်။ Q1 တွင် Wildbrain Spark ၏ ၀ င်ငွေသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် WildBrain Spark ၏အွန်လိုင်းပရိသတ်သည် ၂၀၁၁ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်၏ပထမသုံးလပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၂ ဘီလီယံကျော်ကြည့်ရှုခြင်းမှ ၆၆% တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပထမသုံးလပတ်တွင် WildBrain Spark သည်တစ်လလျှင်ကြည့်ရှုသူ ၄ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့သည်။ ဝင်ငွေအရ WildBrain Spark ၏ ၀ င်ငွေသည် ၂၀၁၁ ဘဏ္Yာရေးနှစ်၏ပထမသုံးလပတ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၆.၂ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၂.၁ သန်းသို့ ၃၇% မြင့်တက်ခဲ့သည်။
WildBrain သည်၎င်း၏အမည်ထက်မကပြောင်းလဲနေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်မကြာသေးမီကဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်ခိုင်မာသောသက်တမ်းရှိသည့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ had ခဲ့သူအဲရစ် Ellenbogen အံ့ Enterpr ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် DreamWorks Animation ရဲ့၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယခုသူသည် WildBrain ၏ ဦး ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ into မှလအနည်းငယ်အပြီးတွင်အဲရစ်သည်နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းအထိရရှိနိုင်မည့်စီမံခန့်ခွဲမှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူသည် WildBrain ၏စာကြည့်တိုက်များကိုတည်ဆောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်၊ အဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောမူရင်းအကြောင်းအရာများအပေါ် အဓိကထား၍ ဖြန့်ဝေမှုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ငွေရှာနိုင်သည်။ ဤဥပမာ၏ဥပမာကောင်းမှာမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အာကာသအတွင်း Snoopy။ ဒီစီးရီးကို WildBrain ရဲ့ဖန်တီးမှုအဖွဲ့ကတီထွင်ဖန်တီးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်း ဦး ရာသီက Apple TV တွင်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
DHX Media / WildBrain မှ ၂၀၂၄ ခုသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောငွေချေးစာချုပ်များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ရှယ်ယာတစ်စုလျှင်ဒေါ်လာ ၈ ဒေါ်လာဖြင့်သာမန်စတော့ရှယ်ယာများသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် DHX / WildBrain သည် ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးကွက်စျေးနှုန်းသည်ပြောင်းလဲမှုစျေးနှုန်း၏ ၁၃၅% ဖြစ်လျှင်၊ ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ၁၀.၈၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် DHX / WildBrain ဟာရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်မှာစတော့ရှယ်ယာရဲ့လက်ရှိစျေးနှုန်းရဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းနဲ့ဘုံစတော့ရှယ်ယာကိုထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီငွေစက္ကူတွေကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို bondholders များသတိထားသင့်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်က DHX Media / WildBrain စတော့ရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၁.၃၄ မှအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ ၂.၉၀ အထိရှိသည်။
အတိုးအကျုံး ၀ င်မှုသည်ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိကြွေးမြီအဆင့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပြသသည်။ လတ်တလောသုံးလပတ်တွင် WildBrain သည် (ငွေသားမလိုအပ်သောငွေပမာဏများအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပဲ) ဒေါ်လာ ၁၃.၁ သန်းနှင့်အတိုးနှုန်းကို ၁၁.၁ သန်းအဖြစ်ဒေါ်လာ ၁၁.၁ သန်းဖြင့်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေသတိပြုသင့်တာကသုံးလပတ်အကုန်မှာကုမ္ပဏီကအခွင့်အရေးကမ်းလှမ်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးအရင်းအနှီးအလုံအလောက်ရှိပြီးဒေါ်လာသန်း ၅၀ ပေးရမယ်။ ငွေဖြစ်လွယ်မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ WildBrain တွင်ဒေါ်လာ ၃၉.၆ သန်းရှိသည်။
WildBrain ငွေချေးစာချုပ်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပိုမိုသောအရာများဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ။
[contact-form-7 id =” 60233″ title =” ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ - Durig”]
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အန္တရာယ်မှာ WildBrain သည်၎င်း၏ WildBrain Spark ရုပ်သံလိုင်းပေါ်တွင်သာမက Apple TV ကဲ့သို့သောရိုးရာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်နှင့် subscription service ကဲ့သို့သောအခြား platform များမှတစ်ဆင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ပြီးဆက်လက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်မည်လားဆိုသည်ဖြစ်သည်။ WildBrain Spark သည်လွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကထက်သန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် WildBrain ၏မူလအကြောင်းအရာဖြစ်သော Snoopy in Space သည် Apple TV ကြည့်ရှုသူများအားကောင်းစွာလက်ခံခဲ့ပြီးမျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်များအတွင်းကြည့်ရှုသူအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အလားအလာရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပိုဆောင်းမူရင်းအကြောင်းအရာများထုတ်လုပ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းကိုလည်းငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သင့်သည်။ ရေရှည်တွင်ကုမ္ပဏီကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသော ဦး ဆောင်မှုအသစ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Durig Capital ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်စွန့်စားရမှုလျော့နည်းသည် FX2 ဝင်ငွေအစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲ တစ် ဦး ချင်းငွေချေးစာချုပ်များ၏ဝယ်ယူမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအများအပြားနှောင်ကြိုးထုတ်ပေးသူနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့၎င်း၏အမျိုးမျိုး, ကြောင့်။ သမိုင်းကြောင်းအရ FX2 အစုစုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များကိုရွေးချယ်ပေးသောပေါ်တူဂီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာသာလွန်သည်။ Durig သည်လက်ရှိတွင် FX2 Portfolio ၌ဤနှောင်ကြိုးကိုကိုင်ထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အတိုးနှုန်းကျသည့်အခါအပြန်အလှန်အားဖြင့်နှောင်ကြိုးစျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုမိုနိမ့်သောကူပွန်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ရေရှည်ကြွေးမြီတူရိယာများအတွက်ပိုမိုသိသာစေသည်။ ရင့်ကျက်မှုမတိုင်မီရောင်း ၀ ယ်သည့်သို့မဟုတ်ရွေးနှုတ်သောမည်သည့်ပုံသေ ၀ င်ငွေအာမခံမဆိုအမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုနိမ့်သောအကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်, ထို့ကြောင့်စွန့်စားမှုပိုမိုမြင့်မားဒီဂရီနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်အပေါင်းတို့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့အသင့်လျော်မည်မဟုတ်ပါ။
WildBrain သည်ကလေးများပါဝင်သောအကြောင်းအရာနှင့်ကောင်းမွန်သောနေရာကိုတွေ့ပြီဖြစ်သည်။ သူတို့၏စာကြည့်တိုက်အများစုသည်အချိန်ကုန်သက်သာပြီးအကြိမ်ကြိမ်ငွေကြေးအမြောက်အများရရှိနိုင်သည့်အပြင်မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နိုင်ငံများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုသူတို့နားလည်ကြသည်။ WildBrain Spark ကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိကလေးများကစောင့်ကြည့်နေပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ကပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ပထမဆုံးမြေပဲအကြောင်းအရာကိုကောင်းစွာလက်ခံခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအတွက်မူရင်းအကြောင်းအရာထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်သည်စျေးကွက်လေးပုံတပုံမှလေးပုံတစ်ပုံလောက်သာမဟုတ်ဘဲရေရှည်တိုးတက်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီကိုကောင်းကောင်းအစေခံသင့်သည်။ Durig သည်ဤ ၂၀၂၄ ချည်နှောင်ခြင်းတွင်နေရာယူထားပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းတို့သည် Durig's တွင် ထပ်မံ၍ တွက်ချက်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစု.
Durig Capital တွင်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းများစွာရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
Fixed ဝင်ငွေ2- FX2
အဆိုပါ Dow ၏ Dogs ကို
အဆိုပါ S & P ကို ​​500 ၏ခွေးများ
TD Ameritrade အကြံပေးများ
ယခုငါတို့အလွန်အောင်မြင်စွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) အစုစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dividend အရစ္စတိုတယ် 40 အစုစု, ငါတို့ ဝင်ငွေ Aristocrats အစုစု TD Ameritrade Institutional တွင်သီးခြားအကောင့်များမှတဆင့်အခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား ဤအချက်သည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
ထုတ်ပေးသူ: DHX Media / WildBrain
Ticker: DHX (TO)
ကူးပြောင်းစျေးနှုန်း: $ 8.00 / ရှယ်ယာ (CAD)
လက်ရှိစျေးနှုန်း (၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်အထိ) ဒေါ်လာ ၁.၅၀ / ဝေစု (CAD)
ရင့်ကျက်မှု: 09 / 30 / 2024
ချေ: နှစ်စဉ် Semi- နှစ်စဉ်
စျေးနှုန်း ~ 85.0
ရင့်ကျက်မှုသို့ရောက်သည်: ~ 9.75%
Durig Capital သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအားစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အထူးပွင့်လင်းမြင်သာသောဘဏ္fidာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ငါတို့ FX2 (ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှု) အချိန်နှင့်အမျှအစုစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ FX1 (ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်သော) အစုစုသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး FX1 ၏အမြတ်ငွေ (တစ်ခါတစ်ရံနှစ်ဆ) ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျယ်ပြန့်သောနှောင်ကြိုးများ၊ အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးသက်သာသည့်စျေးကွက်များ၌မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်းနှောင်ကြိုးဝန်ဆောင်မှုများတွင်သက်သေမပြနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူအကောင့်အများစုသည် SPIC အာမခံထားသည့်အထူးလျှော့စျေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် TD Ameritrade Institutional တွင် (သို့) Interactive ပွဲစားများတွင် ၄ င်းတို့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အလွန်အောင်မြင်သော FX2 ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြားမှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများ၏ဖောက်သည်များအား TD Ameritrade ရှိအကောင့်များမှတဆင့်စတင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်သင်နှင့်သင်၏လက်ရှိအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။
ထောင်ပေါင်းထောင်ချီသောနှောင်ကြိုးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်သူတို့၏အခြေခံကျသောအခြေခံများကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ခဲ့ပြီဟုသတ်မှတ်ထားသောစံသတ်မှတ်ချက်များကိုအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမရှာဖွေမီလ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦး စားပေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှောင်ကြိုးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ဦး စွာဖောက်သည်များသို့ဖြန့်ဝေသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အီးမေးလ်သတင်းလွှာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ချိပြီးထောင်နှင့်ချီသောအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများသို့ဖြန့်ဝေသည်။ ငွေချေးယူမှုနှုန်းအလွန်နည်းပါးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အကျိုးစီးပွါးအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှုမြင်ခြင်းတို့ရှိပါက Bond ရွေးချယ်မှုများကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တိုးတက်လာသောအခြေခံများနှင့်အတူမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူသောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သာလွန်မြင့်မားသောဝင်ငွေမြင့်မားသော ၀ င်ငွေခွန်ကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားစွာရရှိခြင်းကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟု Durig Capital ကယုံကြည်သည်။
ဖွင့်လှစ်ခြင်း: Durig Capital နှင့်အချို့သောဖောက်သည်များသည် DHX Media / Wildbrain စက်တင်ဘာ ၂၀၂၄ နှောင်ကြိုးများတွင်ရာထူးများရယူနိုင်သည်။
စွန့်စားမှုခွငဖြေ - ဒီသုံးသပ်ချက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြံဥာဏ်အဖြစ်မယူဆသင့်ဘူး။ မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်သည်ကိုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သာအရင်းအနှီးနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံ; ဆိုလိုသည်မှာဆုံးရှုံးသွားလျှင်သင့်ဘဝပုံစံနှင့်သင်၏ဘဏ္lifestyleာရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ငွေဖြင့်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ရလဒ်များသည်အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမျှဤစာပေးစာယူအကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကတိသို့မဟုတ်အာမခံချက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်သည်။
ဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Durig Capital သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ဤစာပေးစာယူတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်များမှရရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်ကိုအာမခံချက်မရှိပါ။ အနာဂတ်အခြေအနေများ၏စီမံကိန်းကိုကြိုးစားသောအခါမည်သည့်အမျိုးအစားအာမခံချက်ကိုဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
2019 2020 Apple AVOD Baskin-Robbins Bond သုတေသန Bond ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ငွေချေးစာချုပ်များ Caillou ကာတွန်း ချာလီဘရောင်း ကလေးများအတွက်ဖျော်ဖြေမှု Comcast အများပိုင်သတင်း အကြောင်းအရာ ပြောင်းလဲ Bonds Corporate Bonds Degrassi DHX DHX မီဒီယာ DHXM Durig Capital ကို Entertainment က Fixed ဝင်ငွေခွန် FX2 မြင့်မားသည် Iconix Iconix အမှတ်တံဆိပ်အုပ်စု စစ်ဆေးရေး Gadget ကို စိတ်ဝင်စားမှု ကလေးများဖျော်ဖြေမှု မြေများအဆုံး လေဝိအမျိုးရဲ့ Macy ရဲ့ မီဒီယာ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာတွေကို အွန်လိုင်း streaming များ မြေပဲ ရှိုးပွဲများ ဆွ စတော်ဘယ်ရီ Shortcake streaming များ စူပါမာရီယို Teletubbies ရုပ်မြင်သံကြား Tupperware TV ဗီဒီယို WildBrain Xfinity အသားပေး Youtube ကို
SD-WAN: လုံခြုံရေး, လျှောက်လွှာအတွေ့အကြုံနှင့်စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းမောင်းနှင်မှုစျေးကွက်ကြီးထွားမှု